» जसपा विवादको आज अन्तिम बहसः निर्वाचन आयोगले कसलाई देला आधिकारिकता ?
जसपा विवादको आज अन्तिम बहसः निर्वाचन आयोगले कसलाई देला आधिकारिकता ?
७ श्रावण २०७८, बिहीबार ११:२७
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को आधिकारितासम्बन्धी विवादको अन्तिम बहस बिहीबार हुने भएको छ । पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि आफ्नो दावी गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले सो विवादको निरुपणका लागि इजलास गठन गरी साउन ३ गतेदेखि बहस चलाइरहेको छ । पहिलो चरणको बहस सकिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आआफ्नो सक्कल प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
उनले भने, ‘दुवै पक्षको प्रमाण र त्यसमा भएको बहस सुनेपछि आयोगलाई त्यसैमा चित्त बुझ्यो भने आजै रिजल्ट दिनसक्छ, नभए एक दुई अझै टाइम लिनसक्छ ।’